Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif oo si adag uga hadlay dagaalada ka socdo Galmudug iyo Hirshabeelle – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif oo si adag uga hadlay dagaalada ka...
Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif oo si adag uga hadlay dagaalada ka socdo Galmudug iyo Hirshabeelle
Beegsonews-Madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa si adag kaga hadlay xiisadaha colaadeed ee ka taagan deegaanada maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug, kuwaasi oo u dhaxeeya maleeshiyaad wada daga Xeraale iyo degmada Cadale.
Qoraal uu soo saaray madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayuu wuxuu kaga hadlay dagaalada ka dhacay deegaanada ka tirsan Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe, waxaana uu dalbaday in si dhaqso ah loo joojiyo dagaal beeleedyada ka dhacaya goboladaasi.
Sidoo kale Xasan Sheikh Maxamuud, ayaa ka dalbaday dowladda Soomaaliya iyo maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle inay xil iska saaraan dagaaladaasi sidii loo joojin lahaa.
“Waxaan ugu baaqayaa madaxda Galmudug, madaxda Hirshabeelle iyo Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya iney gutaan waajibkooda ah badbaadada iyo ilaalinta badqabka shacabka meel kasta oo ay joogaanba” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa ka hadlay dagaalada ka dhacaya gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe, waxaana uu baaq u diray dadka dagaalamaya.
“Waxaan ugu baaqayaa walaalaha Soomaaiyeed ee ku dagaalamaya deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud inay colaadda ka fogaadaan oo ay si shuruud la aan ah xabadda u joojiyaan, wadahadal iyo isqancinna lagu dhameeyo wixii tabasho ah ee u dhaxeeya”ayuu yiri Shariif Sheikh Axmed.
Dagaalada labada maleeshiyaad u dhaxeeya ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyada dagaalamaya.